Posted by Tranquillus | Agoosto 16, 2018 | Xafiiska
Sida turjumidda qoraalka ah ee luqad kale u dhiganta, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo turjubaan khibrad leh si loo hubiyo tarjumaad u dhow dhammaystirka. Halka xulashadani aysan suurtogal ahayn, marka la eego miisaaniyad kooban, isticmaalka qalabka tarjumadda ee internetka waa in la tixgeliyaa. Haddii aysan u fiicnayn turjumaan xirfad leh, waxay sidoo kale bixiyaan adeeg qiimo leh. In kastoo ay jiraan cillado, qalabka tarjumadda ee online-ka ah ayaa arkay aragti wacan si loo bixiyo turjumaad dheeri ah oo macquul ah. Sidaa daraadeed waxaan isku dayeynay inaanu qiimeyno qalabka tarjumada ugu fiican ee internetka si loo helo fikrad ah tayadooda iyo samaynta isbarbardhig degdeg ah.
Turjumaadda DeepL: qalabka ugu fiican ee lagu turjumo qoraalka
DeepL waa turjumaan macquul ah oo macquul ah oo aan shaki ku jirin turjubaanka bilaashka ah ee bilaashka ah. Tarjumaadaha uu bixiyay farqiga faraha badan ee turjubaanada kale ee internetka ah. Isticmaalka waa mid sahlan oo loo barbardhigo qalabka kale ee tarjumadda. Si fudud u qor ama u dheji qoraalka si loogu turjumo foomka bogga oo dooro luqadda bartilmaameedka si aad u hesho tarjumaadda.
Turjumadda DeepL waxay hadda bixisaa tiro kooban oo kooban, oo ay ku jiraan Ingiriis, Faransiis, Isbaanish, Talyaani, Jarmal, Dutch iyo Polish. Hase yeeshee, weli wali waa naqshad iyo dhow, waa inay awood u yeelato inay turjumaan luqadaha kale sida Mandarin, Japanese, Ruush, iwm. Si kastaba ha ahaatee, waxay bixisaa tarjumaad ku-salaysan ku-ool ah iyo tayada aadanaha oo ka badan qalabka kale ee tarjumaadda.
Imtixaan yar oo Ingiriis ah oo Faransiis ah ama luuqad kale oo ku qoran DeepL, waxaan si deg deg ah u ogaanay sida wanaagsan ee ay tahay. Waa asal ah mana tarjunid turjumaad ah oo aan ku xirnayn macnaha guud. Turjumaanka DeepL wuxuu leeyahay muuqaal kuu ogolaanaya inaad ku dhejiso ereyga tarjumaadda oo aad heshid fikrado isku mid ah.
Qalabkani waa mid wax ku ool ah oo waxtar leh haddii ay dhacdo qalad turjumaad ah, markaa waxaad ku dari kartaa ama tirtir kartaa ereyada qoraalka tarjumaada. Haddii ay tahay gabay, dukuminti farsamo, maqaalo wargeys ah ama noocyo kale oo dukumiinti ah, DeepL waa tarjumaha online-ka ah ee ugu fiican oo bilaash ah, natiijooyin fiicanna wuu helayaa.
Google Translate, qalabka turjubaanka ee ugu badan
Google Translate waa mid ka mid ah qalabka tarjumadda ugu caansan oo loogu talagalay dadka isticmaala. Waa qalab tarjumaad luqado badan leh oo leh tayada qoraallada tarjumaadda ee dhererka macnahiisu, laakiin maaha sida fiican ee DeepL. Google Translate wuxuu bixiyaa wax ka badan luuqadaha 100 wuxuuna awoodaa in uu turjumo 30 000 hal mar.
Haddii horey loogu soo turjunay tarjumaadaha luqadaha kala-duwan ee turjubaanka ah, waxay bixisay turjumaad tayo aad u hooseeya, waxay soo kobcisay waxyaabo badan waqtiyadii dhowaa si ay u noqdaan goob tarjumaad lagu kalsoonaan karo iyo goobta ugu badan ee lagu isticmaalo adduunka. Marka marawaxada, si fudud u gali doorashada qoraalka iyo qalabka tarjumadu si toos ah ayuu u ogaanayaa luqadda. Waxaad turjumi kartaa bogga internetka adigoo tilmaamaya cinwaanka goobta.
Sidaa darteed, mid si toos ah u turjumi karaa bogagga shabakada adoo ku daraya faafin Google Translate in google search engine engine. Waa sahlan tahay in dukumiintiyada loo turjumo kombuyuutarkaaga ama casrigaaga. Waxaan turjumi karnaa noocyo dhowr ah sida qaababka PDF, faylalka Word iyo waxaan sidoo kale ku turjumi karaa erayada sawir daqiiqad ah.
Xaqqa u ah ruuxa Google, turjumaankan waa sahlan weyn oo la adeegsado iyo fududaan muuqaal ah oo muuqaal ah, ma soo rogeyso xayeysiis ama waxyaabo kale oo wax-ka-qabashada. Turjunka Ingiriis-Faransiiska iyo luqadaha kale ayaa si xad-dhaaf ah u dhaqma oo dhacaya marka qoraalka la galo. Afhayeenka kuu hadla ayaa kuu oggolaanaya inaad dhageysatid qoraalka salka ah ama mid la turjumay oo leh erayo fiican. Turjumaadda Google waxay u oggolaataa dadka isticmaala inay ku dhejiyaan erayada qaarkood qoraalka tarjumaada iyo ka faa'iideysta tarjumaadaha kale.
Jeegareynta iyo jumladaha naxwe ahaaneed waxay la xidhiidhaan erayada saxda ah ee ereyada khaldan ee qoraalka lagu turjumo. Iyadoo database-ga ah boqolaal kun oo tarjumadood ah, Google-ga wuxuu markasta maamulaa bixinta tarjumaadda ku filan. Waxaa suurtagal ah in la hagaajiyo maalin kasta mahadnaqa, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in la helo turjumaad xoogan oo xoogan.
Turjubaanka Microsoft kaas oo magaciisu soo jeediyo waxaa soo jeedinaya shirkadda Bill Gates. Ujeedadu waxay tahay in ay noqoto qalab lagama maarmaan ah laguna daro barnaamijka tarjumaadda Internetka ee kale. Turjumaankan waa mid aad u awood badan waxaana loo turjumay in ka badan afartan luqadood. Tifatiraha Microsoft wuxuu kala duwanyahay isaga oo bixinaya sheeko nool oo ku nool oo u oggolaanaya in lala hadlo dadka ku hadla luqadaha kale.
Hawshan asalkiisu waa mid aad u sahlan oo wadahadal la yeesha dadka ku hadla luqadaha kale, oo si fiican u yaqaan. Tarjumaha Microsoft ayaa loo heli karaa codsi ku saabsan Android iyo macruufka. Ficil shaqo ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay tarjumaan qoraallada aan xiriir la lahayn. Nidaamka isbeddelka ah ee codsigu waa mid u wanaagsan sida haddii uu ku xiran yahay Internetka waxayna bixisaa xirmo luqadeed si loo soo dejiyo lacag la'aan.
Sidaas awgeed waa suurtagal in la sii wado isticmaalka codsiga inta lagu jiro safar dalxiis oo wata taleefanka casriga ee casriga ah. Turjumaha Microsoft ayaa sidoo kale ka mid ah makiinada qorista qorista ee ku taalla iPadka kaas oo kuu ogolaanaya inaad turjumaan qoraal ama dukumiinti luqad shisheeye ah.
Software-kani wuxuu bixiyaa naqshad garaaf ah oo labadaba fudud oo aan qarsoodi lahayn. Tayada tayada ee tarjumaadaheeda waxaa hubaal ah inay suurtogal tahay in la siiyo jawaab celin. Just sida Tusaale ahaan Google, waxay ku ogaan kartaa luqadda isha waxayna siinaysaa fursad ay ku dhagaystaan ​​tarjumaadda la soo jeediyay.
Reverso turjumaad Faransiis ah
Si sahlan loogu turjumo qoraalka internetka ee Faransiiska luuqad shisheeye ama luuqad shisheeye Faransiis, Reverso waa qalab turjumaad ah oo loo baahan yahay in la isticmaalo marka hore. Adeegga turjubaankan onlineka ah wuxuu badanaa ku xiran yahay Faransiis waxayna u ogolaaneysaa inuu turjumo farriin Faransiis ah siddeed luqadood oo la bixiyay iyo qaabka iyo qaabka. Inkasta oo Reverso kaliya tarjumo qoraal ah oo ku qoran sagaal luqadood, waxay udambeyso sida barnaamijka kale ee turjubaanka ee internet-ka ah oo weliba ka tarjumaya tarjumaadda iftiinka asalka ah ee la xidhiidha wadashaqaynta isdhexgalka.
Reverso waxay ku siineysaa si kastaba ha ahaatee bogga aad u soo jiidasho leh ee maqnaanshaha xayaysiisyada iyo xayeysiiska aan joogtada ahayn waxay u muuqdaan inay mashquulinayaan isticmaalaha. Waxay ahaanaysaa turjumaad tayo leh, qoraallo la tarjumay isla markiiba soo baxa, goobta waxay ku siineysaa fursad ay ku dhegeystaan ​​tarjumaadda la helay. Isticmaalayaasha ayaa gacan ka geysan kara hagaajinta tarjumaadda iyagoo soo dhajinaya faallo iyo muujinta ra'yigiisa ku saabsan turjumaanka la helay.
READ Sida loo nadiifiyo shabakadahaaga bulshada daqiiqado leh Mypermissions?
WorldLingo waa qalab lagu turjumo qoraalo online ah in ka badan soddon luqadood iyo waa tartan adag oo ah goobaha turjumaada ugu fiican ee internetka. Xitaa haddii ay soo bandhigto tarjumaad sax ah, waxay wali leedahay meelo badan oo ay ugu tartamaan si ay ugu tartamaan. WorldLingo waxay leedahay naqshad cad oo si dhakhso ah u ogtahay luqadda isha.
Bogga waxaa kale oo uu bixiyaa weedho xiiso leh tayada tarjumaad celcelis celcelis ahaan. Waxay turjumi kartaa nooc kasta oo ah dukumentiyo, bogag internet ah iyo emayl. Waxay tarjumi kartaa bogagga shabakadda ee 13 luqadaha kala duwan ee xiriirinta kuwan. Si loogu turjumo waraaqaha, waa ku filan inaad ku qorto cinwaanka u diraha iyo WorldLingo ayaa mas'uul ka ah diritaanka diritaanka tarjumaadda.
Qalabkan turjubaanku waa sahlan yahay in la isticmaalo, waxaa ku jira dhowr muuqaal oo taageera faylasha kala duwan. Laakiin marka la eego qaabka bilaashka ah, mid kaliya ayaa turjumi kara erayada 500 ugu badnaan.
Yahoo ilaa Baabiliiska Turjumaadda
Qalabka turjumaada ee Yahoo waxa lagu bedelay software Baabiloon. Software-kani waxa uu ku bixiyaa tarjumaad ku dhawaad ​​77 luqadood. Waxa ay caan ku tahay qaamuus hal-mar ah oo aad u wanaagsan tarjumaadda erayada halkii ay ka ahaan lahayd qoraallo dhaadheer. Asal ahaan, kama soo muuqan tayada tarjumaaddeeda waana mid gaabis ah. Intaa waxaa dheer, waxaanu ka xunahay xayeysiisyada qulqulka ah ee yareynaya ergonomics ee goobta. Turjubaanka Baabiloon waxa lagu dhex milmi karaa Smartphone iyo aaladaha kale ee dhijitaalka ah. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad doorato kelmad ama weedh dukumeenti, mareegaha, a email si loo tarjumo iyadoo la bixinayo turjumaad degdeg ah. Codsigu wuxuu isticmaalaa qaamuusyo badan oo khadka ah oo aan la isticmaali karin offline. Waxa kaliya oo la isticmaali karaa haddii aad ku xidhan tahay shabakad 3G, 4G ama Wifi ah.
Systran, qalab turjumaad online ah
Barnaamijka tarjumaadda ee online-ka ah ayaa wuxuu tiriyaa luuqadaha 15 ee kaydkiisa iyo wuxuu leeyahay 10 000 awood u lahaanshaha saxiixa. Waxay bixisaa ergonomi qurux badan adigoon xayeesiin lahayn. Barnaamijka wuxuu awood u leeyahay inuu dhiibo micnaha guud ee qoraalka luqad bartilmaameed leh oo leh tayada tarjumada celceliska celceliska. Sida dhammaan qalabka kale ee tarjumadda ee internetka, Systran wuxuu bixiyaa waxyaabo badan sida tarjumaadda websaydhka.
Laakiin, waxay xaddideysaa tarjumaadda erayada 150 ee qoraalka ama bogga internetka. Si aad uga gudubto xadadan, waa inaad ku maal gashaa qaybta lacagta ah. Isticmaalkani wuxuu isku xiraa arjiyada Office iyo Internet Explorer sida qalabka adeegsiga. Qoraalka internetka, Ereyga, Muuqaalka, PowerPoint iyo in ka yar 5 MB ayaa la turjumi karaa, iyo qoraallada horey loogu turjumay ilaa megabyte si sahlan ayaa loogu diyaarin karaa.
Qalabkani wuxuu ku tartamayaa Baabil iyo wuxuu ku yaalaa xagga hoose ee darajada, labada barnaamij oo bixiya dhamaan sifooyinka isku midka ah. Waxaan ku dhejin karnaa si toos ah oo looga takhaluso meelaha bannaan ee u dhexeeya erayada qaarkood, gaar ahaan haddii ay tahay nuqul iyo dhejin qoraal ah oo turjumaad ah. Mararka qaar waxay dhacdaa ereyada wada jir ah, Systran marar badan ma aqoonsan doonto ereyga ku jirta sharaxaadkan oo ka tago maadaama ay tahay iyada oo aan isku dayin in uu turjumo. Natiijo ahaan, user ayaa looga baahan yahay in lagu daro boosaska gacanta kadibna bilaabi turjumaadda.
Turjumaad Dheeraad ah
Turjumaadda Bixinta waa goob lagu turjumo oo fiican oo leh tarjumaad waxoogaa ka sarreeya celceliska. Waxay u ogolaataa in si toos ah looga turjumo Ingiriisi iyo 15 luqadaha kale. Turjubaankan waxaa markii hore loogu talagalay xirfadleyda, ganacsatada iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Ergada bogga bogguna waa mid sahlan oo sahlan in la isticmaalo xayeysiisyo yar oo ku yaala bogga iyo badhamada waxqabadku waa mid cad, oo si fiican loo dhigo oo si fiican loo muujiyo.
Marka uu la kulmo erey aanuu aqoonsan, Tarjumaada turjubaanka ayaa si isdabajoog ah u adkeynaya casaanka iyo soo jeedinta talooyinka hagaajinta. Turjumaad Bixin ah waa qalab turjumaan luqado badan ku qoran oo loogu talagalay Windows kaas oo turjumi kara qoraallada, bogagga shabakadda, faylasha PDF, iwm. Waxay ku haboon tahay Word, Outlook, Excel, PowerPoint ama FrontPage. Waxay ku habboon tahay in wax laga beddelo goobaha turjumaadda sida ay baahidiisa u qabo.
Qalabyada ugu fiican ee internetka loogu talagalay turjumista qoraalka ama bogga Agoosto 16th, 2018Tranquillus
horeSidee loo qoraa warbixin xirfadeed?
socdaBaro sida loo soo bandhigo macluumaadka, dhammaan talooyinka si loo gaaro